ငါတော်တော်ညံ့သေးတာပါလား… – Live the Dream
“ငါတော်တော်ညံ့သေးတာပါလား…” ဆိုတာကို ဘယ်သူမဆို တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက်တော့ ရေရွတ်မိကြဖူးမှာပါ။ ခေါင်းထဲဒီလိုအတွေးစမျိုး ဝင်လာတဲ့ အခိုက်အတန့်က ဘယ်အချိန်များ ဖြစ်လိမ့်မလဲ။ ဟုတ်တာပေါ့ ကိုယ့်ထက် ပိုတော်တဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့ရတဲ့အခါ၊ ကိုယ်မသိခဲ့တာတွေ သိလိုက်ရတဲ့အခါ၊ ကိုယ့်အားနည်းချက် တစ်ခုခုကို တွေ့သွားတဲ့အခါ၊ ကိုယ်သိတာတွေက သိပ်သေးငယ်သေးတာပါလား ဆိုတာ သတိထားမိသွားတဲ့အချိန်တွေမှာ ဒီလို အတွေးမျိုး၊ ခံစားချက်မျိုးတွေက လွယ်လွယ်လေးကို ဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ ပြောရရင် ဒါက မကောင်းတာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ့်အခြေ အနေကိုယ် သုံးသပ်နားလည်မိသွားတဲ့ သဘောပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ တစ်ချို့က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားမရ တော့တာတွေ၊ စိတ်ဓာတ်ကျသွားတာတွေ၊ စိတ်ညစ်သွားတာမျိုးတွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးကျတော့ မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေ ဆိုတာကလည်း အဆိုးဘက်များ ရောက်ဖို့ကို သိပ်လွယ်တာလေ။ အဲ့တော့ ဒီလိုအတွေးမျိုး ဝင်လာလို့များ ကိုယ့်စိတ်က တိမ်းညွတ်ကျသွားတဲ့ဘက်ကို ရောက်ချင်နေတယ် ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်လေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ လူငယ်တိုင်း ပိုကြီးမားတဲ့ ဗဟုသုတကမ္ဘာဆီကို လှမ်းနိုင်ကြ ပါစေနော်။
ကျွန်တော်တို့တွေမှာ တစ်ခုရှိတာက ကိုယ့်ကို သူများနဲ့ နှိုင်းပြောတာကျ မကြိုက်ပြန်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကျ ခဏခဏ နှိုင်းယှဉ်နေပြန်ရော။ အထူးသဖြင့် ဒီလို “အော်… ငါတော်တော်ညံ့နေသေးတာပဲ” ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး ဝင်လာတဲ့ အချိန်ဆို ပိုဆိုးတာပေါ့။ သူ့နောက်ကနေ “ငါကျတော့…. သူကျတော့…” ဆိုတာမျိုး ကပ်ပါလာဖို့က သိပ်လွယ်တယ်လေ။ အားနည်းရာကို နှိုင်းယှဉ်တတ်တာက လူ့သဘာဝပေပဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ဒီလို နှိုင်းယှဉ်လို့ ပြောင်းလဲသွားတာ တစ်ခုမှ မရှိမှန်း၊ ကိုယ့်စိတ်ပဲ ထိခိုက်နေမှန်း ကျွန်တော်တို့တွေ ကောင်းကောင်း သိကြပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီအတိုင်းပါပဲ… မနှိုင်းပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အကျိုးလည်း မရှိသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သူများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို သိမ်ငယ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုး မထားတာပါပဲ။ ဒါက ကိုယ့်ရဲ့ တိုးတက်ရာ လမ်းကြောင်းအတွက် ကြီးမားတဲ့ အဟန့်အတားတစ်ခု ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်တော့မှ မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့… ကိုယ်လိုနေသေးတယ် ဆိုရင် လိုနေသေးတယ်ပေါ့ လိုက်နှိုင်းယှဉ်ပြီး စိတ်ဓာတ်တွေ ကျနေစရာ မလိုပါဘူး။
၂။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လက်ခံပါ
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ကျွန်တော်တို့တွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဟုတ်ကြီးထင်ပြီး စိတ်ကြီးတွေဝင်၊ သူများက မြှောက်ပြောလိုက် ကိုယ်က သာယာလိုက်ပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မှာ လိုအပ်ချက် တစ်ခုခု ရှိသွားခဲ့လို့ ကိုယ်ညံ့နေသေးပါလား ဆိုတာများ သဘောပေါက်သွားခဲ့ရင် တကယ့်ကို ယူကြုံးမရဖြစ်မိတတ်ကြတယ်။ ဘာလို့လဲ…. မခံချင်ဘူး၊ စိတ်တိုတယ်၊ မာန ထိသလို ခံစားရတယ်၊ လက်မခံချင်ဘူး။ တကယ်တော့ ဒါဟာ သိပ်ကို မှားယွင်းတဲ့အရာပါ။ ဘယ်သူမဆို လိုအပ်ချက်၊ အားနည်းချက် ဆိုတာ ရှိသလို တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ ကိုယ်လိုအပ်နေတဲ့ နေရာလေး၊ ထပ်ဖြည့်ရမယ့် အပိုင်းလေးကိုတော့ ရှာတွေ့ကြမှာပဲ။ ဒါတွေကို ထပ်ဖြည့်ရင်း ပိုသင်ယူရင်းနဲ့ ရင့်ကျက်ခြင်း၊ ပိုကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခု၊ ပိုတော်တဲ့ လူတစ်ယောက် အဖြစ် ကျွန်တော်တို့ လှမ်းနေကြတာ မဟုတ်ပါလား။ အဲ့တော့ “ငါသင်ယူရဦးမှာပဲ” ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လက်ခံဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လက်ခံနိုင်မှပဲ သင်ယူနိုင်ပြီး သင်ယူနိုင်မှပဲ တိုးတက်နိုင်မှာပါ။
ပြည့်စုံမှုဆိုတာကို အဓိပ္ပါယ်များ ဖွင့်ကြည့်ရရင် ဘယ်လိုနေမလဲ…. လောကမှာ ပြီးပြည့်စုံတယ် ဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ ပြောကြတယ်… တကယ်ပဲ ဘယ်သူမှ မပြည့်စုံကြဘူးလား… ငွေကို ရေလို ထိုင်သုံးနေကြတဲ့ ကျိကျိတက် ချမ်းသာသူတွေရော၊ ထူးကဲတဲ့ ပါရမီတွေနဲ့ မွေးဖွားလာသူတွေရော…? ဟုတ်ပါတယ် ဘယ်သူမှ မပြည့်စုံပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့တွေ မပြည့်စုံကြလို့ပဲ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကွဲပြားနေကြတာပေါ့။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားနည်းတဲ့အရာကို သူများရဲ့ အားသာရာနဲ့ လိုက်နှိုှုင်းကြတယ်လေ။ တကယ်တော့ ပြီးပြည့်စုံမှုဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်လိုသဘောထားလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်ပဲ အခြေတည်ပါတယ်။ ကိုယ်အားကျနေရတဲ့ သူက တခြားသူတစ်ယောက်ကို အားကျနေရတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ ဒါကြောင့် အဓိက က ကိုယ့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်လေးတွေ တွေ့လာခဲ့ရင် ပြင်ဆင်ဖို့၊ တိုးတက်ဖို့၊ သင်ယူဖို့ကို ဦးစားပေးပါ။ ဒါဆိုရင် မပြည့်စုံတဲ့ လောကကြီးမှာ ပြီးပြည့်စုံမှုရဲ့ အနှစ်သာရကို ခံစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားနည်းချက်တွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေဟာ အကောင်းဆုံး တွန်းအားတွေ ဖြစ်နေ တတ်ပါတယ်။ အသုံးချနိုင်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်လေးတွေ နောက်ကွယ်မှာ “အရမ်းညံ့တာပဲ၊ ငါဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး” လို့တွေးလိုက်ရင်တော့ မကောင်းသော ဆွဲအားပေါ့လေ။ ဘာလို့ဆို အဲလိုအတွေး ဝင်လာတာနဲ့ လူက အပေါ်မတက်ဘဲ အောက်ကျသွားမှာကိုး။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ “အင်း ငါညံ့သေးတယ်၊ ကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ်၊ ပိုကြိုးစား ရမယ်၊ ပိုလေ့လာရမယ်” ဒီလိုတွေးရင်တော့ အကောင်းဆုံး တွန်းအားတစ်ခု ဖြစ်လာမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားသာချက်ဖြစ်စေ အားနည်းချက်ဖြစ်စေ အရာအားလုံးက ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုတွေးပြီး ဘယ်လို ခံယူသလဲ ဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လိုအပ်သေးတာပဲ ထင်ရင် ဒီလိုအပ်ချက်ကို တွန်းအားအနေနဲ့ အသုံးချပြီး အပေါ်ကို တက်ပါ။ ပိုကြီးမားတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုဆီကို အရောက်လှမ်းပါ။ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်ကို လှေကားထစ်တွေလို အသုံးချပါနော်။ ဒါဆိုရင် အဆိုးထဲက အကောင်းဆိုသလို လိုအပ်ချက်ကနေ အားသာရာတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။
၅။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စစ်ဆေးပါ
ဒီအချက်က ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများ မေ့နေတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ တစ်နေရာရာမှာ ကိုယ်မတော်ဘူး၊ သိပ်မကောင်းဘူး၊ အားမရဘူးဆိုရင် ယေဘုယျသဘောလောက်ပဲ ကြည့်ပြီးတော့ ငါမကောင်းဘူး၊ ငါညံ့တယ် ဖြစ်သွားရော၊ စိတ်အားတွေ ငယ်သွားရော။ အချက်တစ်ချက်လေးကနေ ကိုယ်ဆိုတာကြီးက အသုံးမကျဘူး ဖြစ်သွားရော။ အားနည်းချက် တစ်ခုကနေ သုံးစားမရတဲ့သူလုံးလုံး ဖြစ်ရောလေ။ ဒါကတော့ စစ်ဆေးတာတွေ ဘာတွေ မရှိဘဲ အပေါ်ယံ အမြင်နဲ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆိုးချည်းပဲ မြင်နေတော့တာပေါ့။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေချာစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ငါဘယ်နေရာများ လိုအပ်နေတာလဲ၊ ဘယ်နေရာ တိုးတက်ဖို့ လိုနေတာလဲ၊ ဘယ်နေရာ ပြုပြင်ရမှာလဲ ဆိုပြီး အတွင်းကျကျ အသေးစိတ် ကျကျ စစ်ဆေးကြည့်မယ် ဆိုရင်ဖြင့် ဒီကွက်လပ်လေးတွေက စာဖွဲ့နေစရာတောင် လိုတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီးက ရှာဖွေလို့ မကုန်နိုင်တဲ့ ခမ်းနားကြီးကျယ်မှု၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေသလို ဘဝဆိုသော အရာကလည်း သင်မကုန်နိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ ပြည့်နှက်နေတာပါပဲ။ ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံးက ဘဝရဲ့ ကျောင်းသားတွေပေါ့။ သင်ယူရာ ဘာသာရပ်ချင်း ကွဲပြားကြသလို ရကြတဲ့ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတတွေလည်း မတူကြဘူး။ အရည်အချင်းတွေ လည်း မတူကြသလို ဖြတ်သန်းရတဲ့ အခက်အခဲချင်းလည်း ကွဲကြပြန်တယ်။ ဒီလိုကြောင့် လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဆိုတာ ခြားနားမှုတွေ ကိုယ်စီ ဖြစ်နေရတာပေါ့။ ကိုယ်တော်လိုက်တာလို့ အထင်ကြီးမိ သူမှာလည်း သူမသိသေးတဲ့အရာ၊ မကြုံဖူးသေးတဲ့အရာ၊ မခံစားဖူးသေးတဲ့အရာတွေ အများကြီးပဲ။ တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာ သူက ကျွမ်းကျင်နေရုံလေးပါ။ ဒါကြောင့် မတူညီတဲ့ ကျောင်းသားတွေမို့ ကိုယ့်ရဲ့ ကွက်လပ်တွေအပေါ် ငိုကြွေးနေဖို့ထက် သင်ယူဖို့ကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။ “ရှာလေ တွေ့လေ” ပဲမဟုတ်လား…. ထိုင်မနေဘဲ၊ ငေးငိုင်မနေဘဲ တကယ် ရှာဖွေမယ်ဆိုရင် အဖြေတွေကို တကယ်တွေ့မှာပေါ့။